कर प्रशासनको उत्पादकत्व बढाउने काम भइरहेको छ: अर्थमन्त्री शर्मा (अन्तर्वार्ता) « Jagaran News
Published On : 17 November, 2021 1:54 pm
काठमाडौं, मंसिर १ । आज दसौँ राष्ट्रिय कर दिवस देशभर रहेका विभिन्न कर कार्यालयहरुमा मनाइरहेको छ । उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सरकारले सम्मान समेत गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८मा धेरै कर तिर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिलाई सम्मान गरेको हो ।
यता सरकारले राजस्व सङ्कलन दोब्बर पार्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसका लागि यस वर्षलाई कर वर्षकै रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत नै गरेका छन् । त्यसैअनुसार राजस्व प्रशासनले संरचनागत र राजस्व प्रशासनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, अर्थमन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानी :
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरेयता यहाँले बारम्बार राजस्व सङ्कलन बढाउन निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । अहिलेकै परिस्थितिमा राजस्व बढाउन सकिने आधारहरू तयार भइसकेको हो ?
सरकारको बढ्दो वित्तीय दायित्वलाई दिगो रूपमा थेग्न राजस्व वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ । हालको हाम्रो राजस्वले विशेष गरी मुलुकको विकास दायित्वलाई बहन गरेकै छैन र यसमा वैदेशिक सहायताको भर पर्नु परेको छ । सरकारको सामाजिक सुरक्षालगायत चालू खर्च पनि बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ, त्यसैले पनि हामीले राजस्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ ।
राजस्व वृद्धिमा हामीले प्रशासनिक सुधार र कार्यकुशलता, चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा विस्तार तथा करदाताहरूमा स्वेच्छिक कर सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसै कारण यो वर्ष हामीले ‘स्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि: सुशासन विकास र समृद्धि’ भन्ने नारासाथ अघि बढेका छौँ ।
अर्को कुरा कोरोना महामारीको नियन्त्रणसँगै आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् । समग्रमा कर प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउँदै आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याई राजस्व बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
कर सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्तिलाई अहिलेसम्म सफलताको आधार मान्ने स्थापित मान्यताजस्तै बनेको छ तर करको सदुपयोगको प्रश्न सधैँ उठिरहन्छ । कर दिवसका सन्दर्भमा करको अधिकतम सदुपयोग सन्दर्भमा सरकारको योजना के कस्तो छ ?
हामीले जनताबाट प्राप्त गरेको करलाई अत्यन्तै मूल्यवान् स्रोतका रूपमा लिनुपर्छ । यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु भनेको तमाम जनतामाथिको अन्याय हो भन्ने सम्झनुपर्छ । त्यसैले सरकारले जनताबाट प्राप्त करलाई सुशासनमा आधारित सिद्धान्तबाट निर्देशित भई अत्यावश्यक तथा प्रतिफलयुक्त गतिविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । जनताको करको प्रतिफल देशको विकास र समृद्धिमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ ।
यही मान्यतालाई आत्मसात् गरी हामीले यो वर्षको कर दिवसको उपलक्ष्यमा तय गरेको नारालाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्न मलगायत अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्र क्रियाशील छ ।
करको दर र दायरा विस्तारको सन्दर्भमा समय–समयमा आयोग बनाइने र त्यसबाट सुझाव लिने औपचारिक काम मात्रै भएको छ । यस्ता आयोग अथवा समितिबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता के हो ?
सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने तथा करको दरलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधि तथा विकास प्रक्रियाको उन्नतिसँगै नयाँ आर्थिक उपक्षेत्रको विस्तार हुँदै जान्छ र करको दायरा पनि बढ्दै जान्छ । सरकारले यसलाई आफ्नो कर जुरिडिक्सनभित्र ल्याउँछ ।
समग्र कर प्रणालीको सुधारका लागि हामीले यो वर्षको बजेट कार्यक्रममा उच्चस्तरीय कर पुनरवलोकन आयोग निर्माण गरी करको दर एवं दायरालाई वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउने काम पनि अघि बढाएका छौँ ।
निजी क्षेत्रले पनि बारम्बार करको दरभन्दा दायरा बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । करको दायरा विस्तारमा सरकारको प्रयास अब कस्तो हुन्छ ?
यसबारे मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँगको छलफल र अन्तरक्रिया, करका सर्वमान्य सिद्धान्त तथा अभ्यासका आधारमा नै करको नीति नियमलगायत दायरा र दर निर्धारण गरिनेछ ।
कर प्रणाली अझै पनि करदातामैत्री भएन भन्ने गुनासो अझै पनि सुनिन्छ । ‘फेसलेस’ कर प्रणालीको कुरा पनि उठिरहेको छ । यस्तोमा करदाता उपस्थित नभई कर भुक्तान गर्नसक्ने सम्पूर्ण प्रणालीको अपेक्षा कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ ?
यो वर्ष हामीले यहाँले उठाएको विषयमै राजस्व प्रशासनलाई केन्द्रित गरेका छौँ । कर प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाएर नै स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने हो । यसका लागि करदातालाई बिनाझन्झट, प्रविधिमैत्री तवरले कर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्य त फेसलेस मात्र होइन, पेपरलेस, ह्यासललेस बनाई कर प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाउनेमा केन्द्रित छ र हामी यस प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका छौँ ।
करको प्रभावकारिता सरकारले गर्ने खर्चमै देखिन्छ । खर्चका सन्दर्भमा यहाँले दिनुभएका निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था के छ ?
म अर्थमन्त्रीको हैसियतले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपश्चात् राजस्वको परिमाणात्मक र गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिएसँगै राजस्व परिचालनमा पनि परिमाणात्मक र गुणात्मक सुधार गर्नुपर्छ भनी क्रियाशील छु । समयमै खर्च गर्न संरचनागत सुदृढीकरण र नीतिगत व्यवस्थासमेत गर्न आवश्यक छ । यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
राजस्व परिचालनअन्तर्गत सरकारी खर्च आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा अत्यन्त बढी हुने र सुरुका महिनाहरूमा अत्यन्त कम हुने कार्यलाई म करेक्सन गर्दै छु । यसका लागि मैले निरन्तर रूपमा विकास खर्च ठूलो हुने मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी कार्ययोजना माग गरेको छु र सो कार्ययोजनाअनुरूप वर्षमा औचित्यताका आधारमा सकेसम्म समानुपातिक रूपमा मासिक खर्च गर्ने पद्धतिको विकासका लागि क्रियाशील छु ।
कर प्रशासन सुधार, कर सङ्कलन लागत घटाउने सन्दर्भमा सरकारको प्रयास के छ ?
मैले अघि नै भनिसकेँ कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवं समयानुकूल बनाउँदै करदातामैत्री बनाउन राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्दै लगिएको छ । त्यस्तै वर्तमान कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री वा फेसलेस, पेपरलेस एवं ह्यासललेस बनाई राजस्व प्रशासनलाई वैज्ञानिक एवं सुशासनयुक्त र करदातामैत्री बनाउँदै छौँ । सरकारका यिनै प्रयासहरूबाट राजस्व सङ्कलनको लागत घटाउँदै कर सङ्कलनमा प्रशासनिक उत्पादकत्व बढाउने कार्य भइरहेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकै प्रकृतिका कर उठाउँदै आएको र त्यसको असर करदातामा परेको गुनासो आउने गरेको छ । यसको निराकरणका कसरी गर्ने गरिएको छ ?
तीन तहको अधिकार संविधानमा उल्लेख भएको छ । सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो । कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो पर्न जाने सम्भावनालाई आ–आफ्ना अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनमा स्पष्टतासमेत आवश्यक देखिएको छ ।- गोरखापत्रबाट साभार
मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अवधारणाअनुरुप वस्तुको प्रदर्शनी: रवीन्द्र शाक्य, उपाध्यक्ष तथा मेला संयोजक
नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा १८औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १६ औं कला प्रतियोगिताको हुँदैछ, यसको
एसियन लाइफले सेयरधनीलाई २७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं, मंसिर १ । एसियन लाइफ इन्सुरेन्सले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ ।
निफ्राले शेयरधनीलाई बोनस शेयर दिने
काठमाडौं, मंसिर १ । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा)ले शेयरधनीलाई बोनस शेयर दिने भएको छ ।
मन्दाकिनी हाइड्रोपावरले आइपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौं , मंसिर १ । नेपालमा आइपीओ निष्काशनको लाइनमा धेरै कम्पनीहरु रहेका छन् यसै क्रममा
स्वामी रामदेवले नेपालमा टेलिभिजन खोल्दै
काठमाडौं, मंसिर १ । भारतीय बाबा रामदेवले नेपालमा टेलिभिजन खोल्ने भएका छन् । रामदेवको पतञ्जली